Home Somali News Somaliland:“Dib U Dhaca Doorashada KULMIYE Iyo WADDANI Cidda Ka Masuulka Ah Fagaare...
Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi, ayaa ka hadlay dib u dhaca doorashada 26-ka June ku mudaysnayd, waxaanu Mucaaradka u soo jeediyay inay dulqaad muujiyaan sidii horeba ay ugu dulqaadan jireen dib u dhacyada doorashada ku iman jiray.
Gudoomiye Muuse Biixi oo maanta ka hadlayay Munaasibad Hargeysa lagu qabtay ayaa bulshada Somaliland marag u gashaday sidii Xisbiga Kulmiye ugu dulqaadan jiray doorashooyinkii dib u dhici jiray wakhtiguu Mucaaradka ahaa.
“Hal qodob somaliland markhaati ha ka ahaato,Saddex jeer oo la kordhiyay iyo mar xisbiga kulmiye la reebay ee lagu yidhi 82ka cod ayaad ku hadhay, rag ragii dhuuxa ku xidhay ee yidhi mahadli kartaan oo qaranka somaliland Ayaa ka wayn waxa ay ahayeen labada guddoomiye ee hada mucaaradka ah Cabdiraxmaan Cirro iyo Faysal Cali Waraabe,Mucaarid ayaanu wada ahayn markasta oo ay dhirbaaxo nagu dhacdo oo aanu hadla is nidhaa labadooduba garba duub ayay noo xidhayeen”, ayuu yidhi Muuse Biixi.
Gudoomiyaha Kulmiye oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi “Waa dhab qaranka ayaa la isku qabtaa qoyska ayaa la isku qabtaa,laakiin waa inaad yeelataa cid ku qabata,markaad cadhaysan tahay ee wax lagaa dhaco waa inaad Qabsoontaa,Laakiin, nasiib wanaag nimankii geedka nagu xidhay ee qaranka ayaa waxan ka wayn ee geedka nagu xidhay,Su’aal Ayaan waydiinayaa Labada Guddoomiye,Waar wixii aad shalay lahaydeen ee waad dul qaadanaysaan,qaranimadii Maanta Miyaad ilawdeen”.
Gudoomiye Muuse Biixi, waxa uu Masuuliyadda dib u dhaca doorashada ka fogeeyay Xukumadda iyo Xisbigeeda “Maanta waxaanu leenahay haday wax khaldamaan oo ay hawli Timaado khaladka Cida Leh waa Laga naqsan Doonaa,Doorashadan Daahdayna Ma kulmiye ayaa reebay oo dib u dhigay iyo Dawladiisa? Mise wadani iyo Guddoomiyaha Golaha wakiilada? Bal kaayaga Eedu Raacdo Fagaare ayaa la iman Oo somaliland ayaa ka Arimine, Taasi ha dambeysee waxan ay Hada ku hadlayaan Nimankani Maanay Ahayn Cabdiraxmaan Iyo Faysal Cali waraabe waxaan leeyahay halkii taagnaada oo waji kale hayeelanin”.